Baydhabo: Koox hubeysan oo dilay Malaaq caan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya Baydhabo ayaa sheegaya in halkaas siyaabo kala duwan loogu dilay labo nin oo mid ahaa nabadoon midna ahaa nin hadda ka hor lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay Alshabaab.
Nabadoonka la dilay wuxuu ahaa malaaq caan ahaa oo lagu magacaabi jiray Mad-Sabarow oo muddo 50-sano ah ka shaqeynayay nabadeynta; halka kan kalena uu ruux shacab ah oo oran jiray Kalifowye lamana oga cidda falkaas dilka geysatay.
Maxamed Xasan Aadan oo ka mid ah Aqoonyahannada gobolka Bay ayaa u sheegay War-baahinta inaysan wax laga xumaado tahay in habeen walba magaalada dilal aan kala sooc lahayn loogu geysto culummada iyo waxagaradka.
Magaalada Byadhabo waxaa bilihii tegay ka dhacayey dilala qorsheysan oo lala beegsanayo culimada iyo dadka waxgaradka iyo duubabka dhaqanku ku jiraan.